Indawo yokudlala iMetalco → Uyilo lweDolophana encinci • Umvelisi • Umhambisi
Namhlanje ibala lokudlala ivumela ukonwaba okungathintelwanga kunye nokukhuselekileyo emoyeni ovulekileyo kungekuphela kwabantwana bayo yonke iminyaka, kodwa nabantu abancinci.
Ukonwaba ujingi kwaye zonke izixhobo ezibekwe ebaleni lokudlala, ngakumbi xa zibanjelwe kwinkampani yabalingane, yindlela efanelekileyo yokuchitha ixesha lasimahla, kwaye kwangaxeshanye ixhasa ukukhula komntu ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni.
Iindawo zokudlala zabantwana Asinokudibana kuphela ezikolweni nakwizikolo zabantwana abancinci, kodwa nakwiipaki kunye neegadi zasekhaya, kuba kuyaziwa ixesha elide ukuba ukudlala noontanga kwindawo evulekileyo kuvumela ukukhula okungcono kwentlalo kunye neemoto zomntwana, kukhulisa ubuchule bayo kunye nemilo yobungqongqo.
Bona kwakhona: Ipaki, isixeko kunye neebhentshi zegadi
Xa uyila iindawo zokudlala zomenzi Nangona kunjalo, kufuneka ingakhathaleli kuphela izixhobo ezinomtsalane kunye nemibala, kodwa kunye nokuthembeka kwezixhobo. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ukhethe indawo apho abantwana badlala khona, nokuba yipaki yedolophu okanye igadi yasekhaya. amabala okudlala aqinisekisiweyo.
Bona kwakhona: I-rack yebhayisekile - iintlobo kunye nezibonelelo
Umyezo indawo yokudlala Iinkampani ze-Metalco zikuvumela ukuba udlale ngokukhuselekileyo ngaphandle enkosi ngenxa yezixhobo ezinomdla nezisebenzayo ezenza le ndawo yokudlala. Zizo zonke ezi ntlobo zeentshukumo ezijolise kumntu omnye okanye nangaphezulu, ileli, ngamanye amaxesha uyonwabile-ujikeleze, izilayidi kunye nasiphi na isixhobo sokunyuka.
Indawo yokudlala yaseGadini kufanele ukuba iqinisekise ukhuseleko lokudlala kuzo zonke izixhobo ekufuneka zilungelelaniswe nobudala kunye namandla omzimba abasebenzisi.
Izixhobo kunye nezinto zokudlala ezilungiselelwe abona bantwana bancinci zincinci, zinemibala kwaye ziphakamise ezantsi ukulungiselela ukusetyenziswa kwazo kunye nokuqinisekisa ukhuseleko, kwanakubantwana abangaxakekisi kangako. Iindawo zokudlala zegadi, apho abantwana abadala badlala khona, babonelele ngeemvakalelo ezingakumbi kwaye baqinisekise ulonwabo olukhulu kwizixhobo ezintsonkothe ​​kancinci. Kubasebenzisi abakhulu kakhulu, inqanaba lobunzima sele liphezulu kakhulu, ukuze abantu abancinci bangasebenzisi ubugorha kuphela, kodwa bakhulise amandla kunye nonyamezelo.
Iindawo zokudlala zabantwana zicwangciswe egadini, zihlala zicetyiswa ngokulinganisa kunye neendawo zokudlala ezibekwe kwindawo ephakamileyo. Ukongeza kuzo zonke izixhobo zokudlala, kuya kufuneka ukhumbule malunga nomhlaba okhuselekileyo oya kuthi ubambe ukuwa okunokwenzeka. Xa ulungiselela indawo yokudlala, kufanelekile ukukhathalela indawo apho ungabeka khona izitulo kunye netafile ukuze abantwana batye ngelixa bedlala okanye baphumle emthunzini.
Izixhobo zokudlala ezenzelwe nguMetco, inkokeli yehlabathi uyilo oluncinci Ziye zaphawulwa ngoyilo lwangoku kunye nemilo ye-ergonomic, kunye nemibala enomdla kunye nokuqina okwaneleyo, okuqinisekisa ukudlala okumnandi nokukhuselekileyo.
Xa uyila Iindawo zokudlala zabantwana kufuneka ithathele ingqalelo iminyaka yabantwana eyenzele indawo yokudlala kunye nokwenza indawo yabazali okanye abagcini abagcina abantwana ngexesha lokudlala.
Ukulungiselela ukusebenza ibala lokudlala legadi Inokuqulatha izixhobo ezijolise hayi kubantwana nakwishumi elivisayo, kodwa nakubantu abadala kunye nabadala abakhutheleyo. Kwindawo enjalo, ilungu ngalinye losapho linokuzifumanela into kwaye lingonwabisi nje kuphela, kodwa likhathalele nempilo yabo kunye nemeko yomzimba, kwaye konke oku kunokwenziwa ngaphandle nakwinkampani yabathandekayo babo.
Izixhobo eziyilwe nguMetco, ziyila Iindawo zokudlala zegadi, zenziwe ngealuminium kunye neplastikhi enemibala. Indibaniselwano enomdla kunye nokuyila kwezinto ikuvumela ukuba wenze iimilo eziyimilo yezakhiwo ezilungiselelwe umdlalo. Indawo yokudlala egadini ivumela lonke usapho ukuba lonwabe, kuba ayingobantwana kuphela, kodwa nabantu abadala, abanomdla wokudlala ngaphandle.
Kufuneka kukhunjulwe kwakhona ukuba indawo yokudlala kufuneka iqinisekise ukhuseleko lwabantwana abadlala kuyo, ke kufanelekile ukuba ukhethe ibala lokudlala elinesiqinisekiso.
Uyilo lwebala lokudlala kwigadi luyimfuneko Thathela ingqalelo iminyaka yabantwana abadlala kuyo, ubume bendawo, ukukhanya kwelanga, ukubonakala kwabantwana kwiifestile zendlu kunye nendawo yokhuseleko yazo zonke izixhobo kwibala lokudlala. Ukongeza kwizixhobo eziqiniswe kakuhle, indawo ekhuselekileyo efunxa ukuwa nayo ibalulekile.
Namhlanje ibala lokudlala legadi Utyalo-mali aluvumeli kuphela umntwana ukuba onwabe kakhulu, kodwa lukwonyusa nokuqina komzimba, ke kubalulekile ukuba indawo yokudlala iqinisekise ukhuseleko oluphezulu lwabantwana abadlala kuyo.
Ke ngoko, kufanelekile ukukhetha umyili olungileyo kunye nomenzi wezixhobo ezibekwe kwindawo yokudlala, eqinisekisa ukuthotyelwa kwemigangatho yempilo nokhuseleko.
5 / 5 ( 1 ivoti )
ibala lokudlala elinomoyaibala lokudlala leplangasisixa esingakanani isiqinisekiso sebala lokudlalayimalini indawo yokudlalaindlela yokwakha ibala lokudlalaindlela yokwakha ibala lokudlala lomthiindlela yokwenza ibala lokudlalaindlela yokwenza indawo yokudlala yabantwanainkokeli ebaleni lokudlalaipavumente yebala lokudlalaibala lokudlalaibala lokudlalaindawo yokudlala yabantu abadalaindawo yokudlala yabantwanaindawo yokudlala yabantwana eWarsawibala lokudlala legadiibala lokudlala leplangaibala lokudlala leplanga indlela yokwenzaibala lokudlala eGdańskibala lokudlala iGdyniaIndawo yokudlala yaseKatowiceIndawo yokudlala eKrakowibala lokudlalaibala lokudlala ngesiNgesiibala lokudlala poznańibala lokudlalauyilo lokudlalaIbala lokudlala leSzczecinibala lokudlala egadiniibala lokudlala iWarsawibala lokudlala Wrocławibala lokudlala lingcwatyiweindawo yokudlalaiindawo zokudlala zomhambisiibala lokudlala lamanzi
Imigqomo yokwahlula inkunkuma
Imigqomo yokwahlula inkunkuma njengenxalenye yoncedo lokuphinda kusetyenzwe kwakhona kukamasipala ukugcina indawo zikawonke-wonke zicocekile, zishenxise iingxaki ezinxulumene ...